म लामो समय देखी मनमा बेचैन हुने , राम्रो निन्द्रा नलाग्ने , रोग बाट पिडित छु र मैले चितवन को डाक्टर न्यौपानेको सल्लाह अनुसार औषधि खान थालेको पनि धेरै भै सक्यो. लगभग दुइ वर्षा देखि मलाई रिंगटा लाग्ने , बान्ता हुने चक्कर लाग्ने हुन्छ . मैले कुन डाक्टर संग् उपचार गराउनु पर्ला? | Hamro Doctor
म लामो समय देखी मनमा बेचैन हुने , राम्रो निन्द्रा नलाग्ने , रोग बाट पिडित छु र मैले चितवन को डाक्टर न्यौपानेको सल्लाह अनुसार औषधि खान थालेको पनि धेरै भै सक्यो. लगभग दुइ वर्षा देखि मलाई रिंगटा लाग्ने , बान्ता हुने चक्कर लाग्ने हुन्छ . मैले कुन डाक्टर संग् उपचार गराउनु पर्ला?
on Sun, Dec 02 2018 08:54 PM
प्रश्नको लागि धन्यवाद । तपाइँको लक्षणहरु सुन्दा कुनै मनोरोग वा एन्जाइटी जस्तो देखिन्छ । एकपटक मनोरोग विशेषज्ञसंग परामर्श लिनुहोला । यस्तो समस्या आफ्नो दैनिक जीवनयापन र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने सन्चो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा औषधि सेवन पनि आवश्यक पर्न सक्छ। हाम्रोडक्टर मार्फत अनलाइन परामर्श लिन यो लिन्कमा जानुहोला: https://www.hamrodoctor.com/service/psychiatry
on Wed, Dec 05 2018 10:39 AM
Who is the best & effective Doctor in Kathmandu for treatment of...4hours,2minutes ago